Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsira Pakuchenesa Rostov-on-Don kuRussia
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Batak (Toba) Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus)
Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsira Pakuchenesa Rostov-on-Don
Musi wa20 May 2015, mukuru mukuru weguta rinonzi Rostov-on-Don, riri kumaodzanyemba kweRussia, akapa Zvapupu zvaJehovha tsamba yekuvatenda nekuti “vakaita basa hombe pakuchenesa guta racho mumwaka wechirimo.”
Vanhu vemuguta reRostov-on-Don pavaichenesa nharaunda yavanogara, Zvapupu zvaJehovha zvaibva muungano 4 zvakabvisa marara ese ainge azara pamhenderekedzo dzenzizi nemunzira dzeguta racho. Mumaawa mashomanana, vakazadza mabhini anenge 300 uye akazotakurwa nemarori kuti anoraswa.
Nei Zvapupu zvaida chaizvo kubatsira vanhu vanogara munharaunda yacho? Mbuya Raisa vane makore 67 vakati: “Ndaizosvika riini ndichingosiya zvakadaro. Ndinoda kuti guta randinogara richene kuti munhu wese agare munzvimbo yakachena. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vakasaziva zvataita, ini ndinongonakidzwa nebasa racho. Uyewo Jehovha Mwari anozviona.” Mumwewo anonzi Aleksander anowedzera kuti: “Hatingogumiri pakuparidzira vamwe chete asi tinoitawo mabasa anovabatsira. Ndinonzwa ndichifara uye ndichigutsikana pandinoitira vavakidzani vangu zvimwe zvinhu.”
Vanhu vaicherechedza, vakayemura kuzvipira kwakaitwa neZvapupu zvaJehovha. Mumwe murume akatoshamisika paakanzwa kuti Zvapupu zvakanga zvazvipira kuita basa racho zvisingabhadharwi. Akabva asarudza kubatana navo pakuita basa racho uye akazoti: “Handina kumbobvira ndafunga kuti ndaizonakidzwa nebasa iri rekuchenesa ndosara ndichinzwa kuti ndashandira zviripo!” Akatiwo: “Vamwe venyu hamutombogari kuno, asi mauya kuzotichenesera guta redu!”
Mumwe mukuru mukuru weguta racho akaona kuti rimwe boka duku reZvapupu rakaunganidza marara akawanda chaizvo. Akabva avatora pikicha vari pedyo nemabhini avakanga vazadza kuti “anoratidza vamwe kuti basa racho rinofanira kuitwa sei.”